Shiinaha warshad budada mica synthetic iyo alaab-qeybiyeyaal. Huajing
Daawada budada mica
Budada mica ee Calcined
Budada mica qalalan
Budada mica synthetic
Budada mica qoyan
Budada mica ee fasalka qurxinta
Dabiiciga Muscovite budada mica
Fasalka mica fasalka dhismaha warshadaha
budada mica calcined
Dabiiciga mica budada
Budada mica Pearlescent
Budada mica fasalka caaga ah
Mica dhulka qalalan
Budada mica oo qoyan
Budada mica fasalka Rubber
Budada mica dabiiciga ah
Budada mica ee loo yaqaan 'synthetic mica powder' ee la isku qurxiyo waxay u qaataan jajabyada mica dardaro sida alaabta ceeriin, dhammaan jajabyada si taxaddar leh ayaa loo xushay ka hor soo saarista si loo hubiyo in midabka iyo isku mid ahaanshahoodu is waafaqsan yihiin. Budada mica-ga synthetic ee loogu talagalay qurxinta waxaa soo saaray Huajing tiknoolajiyada biyaha lagu shiido ee biyaha lagu iibiyo. Ma jiro kiimiko iyo wasakhda hawsha socota.
Budada Mica Powder
Shayga midab caddaan (Shaybaar) Cabbirka walxaha ()m) D50 pH Hg (ppm) Sida (ppm) Pb (ppm) Cd (ppm) guri （%） saamiga dhinaca cufnaanta badan g / cm3 damacnimo Codsiga
HC400 cad .96 20 ～ 23 7 ～ 8 .1 .1 .1 .1 ＜ 0.5 150 0.22 Matte & dhalaal Maaddada aan culus ee birta ahayn, Daboolidda daahfurnaanta sare & Caddaanta Maqaarka oo saaxiibtinimo leh,
HC800 cad .96 10 ～ 13 7 ～ 8 .1 .1 .1 .1 ＜ 0.5 180 0.14
HC2000 cad .96 5 7 7 ～ 8 .1 .1 .1 .1 ＜ 0.5 140 0.11
SiO2 Al2O3 K2O Na2O MgO CaO TiO2 Fe2O3 PH
38 ~ 43% 10 ~ 14% 9 ~ 12% 0.16 ~ 0.2% 24 ~ 32% 0.2 ~ 0.3% 0.02 ~ 0.03% 0.15 ~ 0.3% 78
cun iska caabin midab Adkaanta Mohs adkeysi mugga adkeysiga dusha sare (Ω) Barta dhalaalida xoog daloolin Caddaan Foorarsiga
1100 ℃ Lacag 3.6 4.35 x 1013 / Ω.cm 2.85 x 1013 1375 ℃ 12.1 > 92 ≥45
cad KV / mm R475 Mpa
Budada mica ee loo yaqaan 'synthetic mica powder' ee la isku qurxiyo waxay u qaataan jajabyada mica dardaro sida alaabta ceeriin, dhammaan jajabyada si taxaddar leh ayaa loo xushay ka hor soo saarista si loo hubiyo in midabka iyo isku mid ahaanshahoodu is waafaqsan yihiin. Budada mica-ga synthetic ee loogu talagalay qurxinta waxaa soo saaray Huajing tiknoolajiyada biyaha lagu shiido ee biyaha lagu iibiyo. Ma jiro wax kiimiko ah iyo wasakheyn ah geedi socodka .sidaa si loo hubiyo in qayb kasta oo ka mid ah dhalada 'crystal crystal' oo tayo sare leh si siman loogu diiri karo budada mica oo leh cabir isku mid ah iyo dhalaal joogto ah. Faa'iidooyinkeeda waxay ka dhigeysaa badeecada ugu dambeysa midab sare iyo joogtayn sarreysa, ma laha qayb bir culus iyo walax waxyeello leh. Waxay hubisaa inaad beddeli karto alaabada qurxinta ee ugu caansan. Budada 'Sythetic mica' waxay ku habboon tahay oo keliya nidaamka midabka farqiga u sarreeya, sida matte, mercerized iyo highlight. Waa walaxda ugu habboon ee alaabada qurxinta-dhamaadka sare leh.
Waa maxay astaamaha gaarka ah ee Fasalka Qurxinta Mica Powder u leeyihiin?
Mica dhulka qoyan wuxuu leeyahay xasiloonida kiimikada wanaagsan. Mica dhulka qoyan wuxuu leeyahay jajabyo wanaagsan, aashitada iyo caabbinta alkali, iska caabinta gabowga iyo shaqada gaashaan wanaaga ee shucaaca ultraviolet. Nadiifinta qoyan kadib, caddadiisa, awooddeeda qarsoon, dhalaal, jilicsanaanta, kala firdhinta iyo isku dhejinta ayaa si weyn loo hagaajiyay. si isku mid ah ayaa loogu qasi karaa biyo iyo glycerin, qaabkeeduna waa mid fiican oo laastik ah. waa alaabta ceeriin ee heerka koowaad ee qurxinta qurxinta ee heerka sare ah iyo walxaha la doorbido ee aasaaska qurxinta, waxaana loo isticmaali karaa emulsion, kareem, wakiilka luul iyo maaddooyin kale.
Saamaynta Gaarka ah iyo Waxqabadka Mica-ga synthetic ee Qurxinta
Synthetic fluorophlogopite waa nooc cusub oo ka mid ah maaddada macdanta 'crystal crystal' ee ka soo baxda macdanta 'mica' oo macnaheedu yahay macdanta 'mica' dabiiciga ah. Kaliya maahan waxqabadka mica-ga dabiiciga ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay nadiifnimo sare iyo caddaan sare, waxqabadkeeduna aad ayuu uga sarreeyaa kan mica-ga dabiiciga ah. Maaddadu waxay ka mid tahay silikaytka, lamellarka, walxaha biraha laba geesoodka ah. Iyada oo dhalaalaysa, ayaa sidoo kale laga dhigi karaa qaab aan dhalaalayn. Qurxinta, waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii midabeyn si loo kordhiyo loona daro dhalaalka qurxinta, taas oo kordhin doonta maqaarka iyo taabashada maqaarka. Ma yeeli doono maqaarka, maxaa yeelay macdanta wax dhibaato ah uma geysaneyso maqaarka, inta badan si kor loogu qaado saameynta muuqaalka dhalaalaysa ee is qurxinta.
Awoodda wax soo saarka: 150ton / bishii
Xirxirida: 40KG / 25KG / 20KG, (Bacda PP ama PE)
Macnaha Gaadiidka: weel ama jumlo
Hore: Budada mica Pearlescent
Xiga: Dabiiciga Muscovite budada mica
Qurxinta qurxinta leh Mica synthetic
Mica dabiiciga ah Vs Synthetic Mica
Sinjiile Mica Highlighter
Sheet Mica ah
waxyaabaha la xiriira
Warshad jumlada casaanka Mica - budada mica qoyan & ...
Qiimaha tartanka go'an Mica Powder - N ...
Bixinta Degdegga ah ee Mica Powder Online - Pearle ...
Qiimo Jaban Mica Powder Waayo Tumblers - Qoyan ...
Jumlada Shiinaha ee Mica Shimmer - Phlogopite mi ...
Qiimaha Jumlada Dheecaan Mica Flake - Mikro qalalan ...
Warshadaha Warshadaha Calcined Mica - Mica dabiiciga ah p ...
Shirkadaha waxsoosaarka ee Mica Powder Pure -...
Qiimo Dhimista Farshaxanka Mica Powder - Qalalan ...
Alaabada Cusub ee Cusub ee Qurxinta-Fasalka Mica Powder - ...
Qiimaha jumlada Shiinaha qurxinta Fasalka Mica Powde ...
Codsiga gaarsiinta degdegga ah ee qurxinta indhaha - Synt ...
Xujiatuan, Ciyu Town, Lingshou County, Shijiazhuang City, Gobolka Hebei, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.